Archive du 01-sept-2021
Madagasikara ≠ Bénin Mpijery 10 000 no neken’ny CAF
Mazava ny resaka momba ny Kianja Barean’i Mahamasina sy ny lalaon’ny hifanandrinan’i Madagasikara sy Bénin rahampitso alakamisy manomboka amin’ny 7ora hariva.
Izay tsy miady olom-bodo, fa izay to fo mpamosavy, hoy ilay ohabolana Malagasy iray. Lojika ny tsy fitovian-jevitra sy tsy fitoviam-pijery eo amin’ny samy olombelona noho ny antony maro.
Fifanjevoana tany Fianarantsoa Jiolahy 3 maty, 5 azo sambo-belona
Lavon’ny OMC ao Fianarantsoa ireo jiolahy raindahiny miisa 3 fantatra fa nanao asa ratsy namoizana ain’olona. Omaly tokony ho tamin’ny 5ora hariva
Zava-doza tany Sambava Ny lohan’ilay zaza menavava sisa hita
Ny alatsinainy 29 aogositra 2021 tokony ho tamin'ny 10 ora maraina no nisy nahita nipetraka teny amin'ny faritra Tsararivotra Fokontany Ambodisatrana 2 ny lohan-jazakely iray izay nampiahiahy ny fomba nanalana ny ainy.
Filankevitra Monisipaly “Tsy azo ekena ny taxi moto”
Mazava ny resaka, isan’ireo lahadinika 4 nodinihina tamin’ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny mpanolontsaina monisipaly ny mahakasika ny “taxi-moto”
Zotra nasionaly Mety hiakatra 15 ka hatramin’ny 20% ny saran-dalana
Mangataka ny hampiakarana ny saran-dalana ho 15 ka hatrany amin’ny 20 % ireo zotra nasionaly eto amintsika. Fantatra izany
Arabie Saoudite Misy Malagasy miantso vonjy…
Efa andro vitsivitsy izao no niparitaka ny horonan-tsary nataona vehivavy Malagasy any Arabie Saoudite. Niasa tany amin’ity firenena Arabo ity izy ireo,
Fanirisoa Ernaivo “Nataon’i Macron maivoka i Rajoelina”
Rehefa tsy hanao tatitra Andriamatoa Andry Rajoelina dia indro ary ny famintinana ny fihaonana tamin'ny Filoha Macron : Tena mafy ny nahazo an'i Rajoelina tao amin’ny Elysée, hoy Rtoa Faniry Ernaivo.
Mpitatitra - fasan’ny karana “Tena tsy mety aminay ny eny Ambohimanambola”
Mangataka ny hananganana tobim-piantsonana vaovao ireo mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena mianatsimo raha araka ny nambaran’ny lehiben'ny tobim-piantsonana eny amin'ny Fasan'ny Karana,
Fitsirihan’ny CAF ny Kianja Barea 2 andro mialohan’ny lalao no natao
Tontosa omaly, 2 andro mialohan’ny fihaonan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra sy ny ekipam-pirenen’i Bénin eo an-toerana,
Mpiasan’ny Easy Park “Tsy hiala eto izahay raha tsy mivoaka ny volanay”
Nitokona tetsy Analakely omaly ireo mpiasan’ny orinasa misahana ny fiantsonam-piara eto Antananarivo teo aloha na Easy park.
Barean’i Madagasikara Feno ny mpilalao, vonona tsara ny ekipa
Feno ny mpilalao Malagasy hiatrika ny lalao goavana rahampitso. Efa eto an-tanindrazana avokoa ny 28 tamin’ireo mpilalao 30 nantsoin’ny mpanazatra Eric Rabesandratana,
Ministeran’ny fanatanjahantena Nanampy trotraka ny vava be nataon’ny Filoha
Taorian’ny Filoham-pirenena, nanenjika mafy ny FMF ihany koa ny Ministeran’ny fanatanjahantena omaly tamin’ny alalan’ny fanambarana an-tsoratra.
Paikady fandaminana Miresaka amin’ny mpitarika sendika ny minisitra sasany
Noraisin'ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny biraony ny solotenan'ny Biraon'ny SYNPA na "SYNdicat du Personnel Administratif" notarihan'ny Filohany omaly.
Mpitsabo nentim-paharazana Voarara ny manao dokam-barotra na mivantana na an-kolaka
Nankalazaina omaly talata 31 Aogositra ny andro Afrikana ho an’ny fitsaboana nentim-paharazana. Anisan’ny nitondra tombontsoa be ho antsika teto Madagasikara ny fisian’izy io raha araka
Zaranaina Christian “Tsy voafolaky ny tandrefana ny valanaretina”
Averiko ihany fa mitohy mandritry ny taonjato maro ny fiainan’ny valanaretina, hoy ny mpikaroka momba ny fitsaboana, Zaranaina Christian.
Antoko TIM Mahajanga Nanao hetsika « Permis de conduire »
Maro ny tanora tsy an'asa amin'izao fotoana izao ary tsy mahafantatra mihitsy ny tena hoaviny. Mba hialana amin'ny rendrarendra sy fifohana sy fisotroana zava-mahadomelina dia nanao ezaka ny antoko Tiako i Madagasikara